Ababoneleli ngeegrafikhi kunye nefektri-China abavelisi bezinto ezenziwayo
☑ Isetyenziswa kwimizi-mveliso yonke, amayeza, ii-elektroniki; ☑ Imveliso isetyenziselwa ukulungiselela izinto eziphambili ze-antipsychotic, ezinje nge-fluguabutanol, daloglabenzene, trihaloperidol, trifluoroperidobenzene, pentafluorolidol, quinolones ciprofloxacin, njl., Kwangaxeshanye, inokusetyenziselwa ukubonakalisa izibulali-zinambuzane, ababulali bamaqanda, iiplastikhi kunye neepolymers zentlaka. Ukunyanzeliswa kwe-fluorobenzene nge-γ-chlorobutyryl chloride inokuvelisa γ ̵ ...
Inkangeleko: Ukucoceka okungamanzi okucacileyo: 99.9% min Amanzi: 0.03% max Umbala (Pt-Co): 10 max Hydrocyanic Acid (mg / kg): 10max Ammonia (mg / kg): 6max Acetone (mg / kg): 25max Acrylonitrile ( mg / kg): 25max Propionitrile (mg / kg): 500max Fe (mg / kg): 0.50max Cu (mg / kg): 0.05max 150kg / igubu, 12Mt / FCL okanye 20mt / FCL UN No.1648, Class: 3, Ukupakisha iqela: II Uhlalutyo lweMichiza kunye nohlalutyo lwezixhobo. I-Acetonitrile sisilungisi se-organic kunye nesinyibilikisi yokwahlulahlula i-chromatografi encinci, iphepha le-chromatografi, ukubonwa okubonakalayo ...
I-200kg / igubu, i-16Mt / i-FCL okanye itanki ye-ISO Izinto ezingenabungozi is Isetyenziswa kwishishini lonke, i-agrochemical Active ingriedient synthesis, idayi kunye namayeza. MaterialIglasi yefayibha yeglasi epholileyo, ekhawulezisa ukusebenza kwepolymerization; arhente abangabancedani ekuveliseni i-resin ye-ion resin kunye ne-acrylic resin; ☑ Isetyenziselwa ukuveliswa kwe-varnish ye-polyester engagcwaliswanga; arhente yokuncedisa amayeza kwimveliso ye-schistosomiasis, penicillin kunye ne-chloramphenicol; Ipolymer Polymerization ...
Agent Iarhente yokunyanga okanye ukukhawulezisa ii-epoxy resins; Kwishishini lokuxuba amayeza, abaphakathi kwezinye i-API, ezinje nge-Imazalil, Tioconazole, Bifonazole. ☑ Izinto ezibalulekileyo zokubulala izitshabalalisi kwi-synergist ye-boric acid, ukulungiswa kwesibulali zinambuzane kunye ne-bactericide. ☑ I-Imidazole yinto ebaluleke kakhulu ekrwada kwaye iphakathi kwimveliso yeekhemikhali entle, enoluhlu olubanzi lwezicelo. I-Imidazole ayikho kuphela kwi-purine amino acid ye-ribonucleic acid kunye ne-deoxyribonucleic acid, kodwa nakwi ...
(R) -3-Aminobutanol, I-CAS 453-18-9, Ii-Amines, i-C10-C14-tert-alkyl, 2-Methyl resorcinol, I-CAS 608-25-3, CAS 3003-25-2,